Wada Hadalka Dowladda Soomaaliya Iyo Maamulka Somaliland Oo Galay Maalintii 3-aad – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Istanbul- Mareeg.com: Wada hadalku u dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Somalilnad ee ka socd adlka Turkiga ayaa galay malintii 3-aad, iyadoo aan weli la sheegin qodobo muhiim ah oo laga wada hadlay.
Wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ka warbixiyay halka ay marayaan wadahadallada u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo maamulka Somaliland oo maalintii saddexaad ka soconaya magaalada Istanbul ee dalka Turkey.
Wasiirka oo u warramay BBC ayaa sheegay in ay meel wanaagsan marayaan wadahadallada, iyada oo ajandaha shirka ee maanta uu yahay qiimayn lagu samaynayo heshiisyadii horay loo gaaray waxyaabihii ka hirgalay iyo in Road-map loo sameeyo wadahadallada.
Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa tilmaamay in is af garashada labada dhinac ay u baahan tahay waqti dheer iyo fadhiyo badan oo laga sameeyo qodobbada ka hadlaya mustaqbalka labada dhinac.
Wasiirka ayaa xusay in mar walba ay dowladda Soomaaliya u samaynayso tanaasul waxyaabaha aan dhaawacayn midnimada dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
“Gudiyada labada dhianc waxay ka soo shaqeeyeen ajande ka kooban labo qodob oo kala ah heshiisyadii hore loo gaaray in la qiimeeyo wixii fulay iyo wixii aan fulin, iyo qodobka labaad oo ah in wadahadalada loo sameeyo Road Map waqtiyada soo socda”ayuu yiri C/kariin Xuseen Guuleed.
Qodobada maanta looga hadlayo wada hadalada ayaa waxaa ka mid ah dib u eegis lagu sameynayo heshiisyadii dhex maray labada dhinac ee wareegyadii u dambeeyay ee wada hadalada ka kala dhacay Turkiga, Dubai iyo London.